Madagasikara: Fisamborana sesilany taorian’ny fanonganam-panjakana tsy nahomby · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 01 Desambra 2010 5:00 GMT
Taorian'ny fitsapa-kevi-bahoaka sy ny fanonganam-panjakana tsy nahomby nifanindran-dalana tamin'izany dia nanaloka ny nosy indray ny fisamborana sy famotorana nitranga sesilany.
Nampidina ny taona kely indrindra ahafahana mirotsaka hofidiana ho filoham-pirenena 40 taona ho lasa 35 taona moa iny fitsapa-kevi-bahoaka iny, izany hoe afaka mandray anjara i Andry Rajoelina (36 taona amin'izao fotoana izao) izay hitondra ny tetezamita ao anatin'ny fotoana tsy voafaritra sady tsy fantatra hoe oviana ny fotoana ahataperany.
Raha ny vokatry ny fitsapa-kevi-bahoaka moa no tarafina dia misongadina fa maro an'isa ny manohana azy : 74% n'ny nandrotsa-bato no nanaiky, izay nahitana taham-pandraisana anjara 52.91% . Tsy te-hahalala ny amin'ity fitsapa-kevi-bahoaka ity moa ny SADC, ny firenena mpanome fanampiana, anatin'izany i Etazonia, tamin'ny nitsikerany fa tsy niaraha-nanomana ny fitsapa-kevi-bahoaka. Nalefan'ny mpisioka an-tserasera (twitterer) iray moa fa iny no fifidianana ratsy fanomanana indrindra teto Madagasikara.
Nifampita ny mpisioka an-tserasera (Twitterer) fa mpanao politika 350 no voafonja hatramin'ny niakaran'i Andry Rajoelina teo amin'ny fitondrana tamin'ny alalan'ny fanonganam-panjakana.
Tamin'ny fotoana nanatanterahana ny fitsapa-kevi-bahoaka moa dia namoaka fanambarana ny mpanongam-panjakana fa hanangana komity miaramila hitantana ny fitondrana tetezamita. Naharitra telo andro ity fikomiana ity mandra-panafiky ny miaramila 100 lahy avy amin'ny fitondrana ny toby namaharan'ny mpioko miisa 20 izay babo tsy nisy ra latsaka.
Nomarihan'i Patrick A moa ny fomba mahavalalanina nandravana ny fiokoana sy ny zava-nanjò nampiharina tamin'ny mpanongam-panjakana tsirairay avy
“Navandravandran'ny faneken'ny manamboninahitra “mpioko” nitolo-batana mora foana, taorian'ny tifi-danitra vitsivitsy, ny fiafaran'ilay fiokoana toa hafahafa ihany, tahaka ny hoe nokendrena ny hitandrovana ny voninahitra ara-miaramilan'ny tsirairay. Nohazavaina taminay moa avy eo fa fifampiraharahana teo amin'ny mpiray andia samy nivoaka tany amin'ny Akademia miaramila no nahafahana namahana ny olana tsy nisiana herisetra. Tsy azo tsinontsinoavina ihany koa fa ankoatra ny tsindry ara-tsaina, ny fanomezan-toky fa ho maivana ny sazy dia mety ho voaresaka nandritra ny fifampirahana ihany koa ny fisiana takalo ara-bola.
Fomba fiady avokoa izany rehetra izany. Ary mety hiteny isika hoe tsy mahafaty tsy akory ny tazom-bola.
Ary entina hanamarinana izany tsikaritra izany dia tsy aritra ny nanavahana ireo mpioko nalefa nivantana tany Tsiafahy sy ireo voantohintohina ny fahafahany, nefa miaina indray ny fiainana andavanandron'ny toby”.
Herinandro nialoha ity fanonganam-panjakana ity dia naiditra am-ponja ihany koa ny mpitarika ny mpanohitra, Fetison Andrianirina, noho ny nandraisany anjara tamin'ny fihetsiketsehana tsy nahazoana alalana ho fanoherana ilay fitsapa-kevi-bahoaka izay efa nampiady hevitra.
Tsy hita ny nisy an'i Fetison nandritra ny herinandro nisian'ny fanonganam-panjakana. Nifandimby nivoaka amin'izan ny sioka [tweets] mifanohitra zava-dazaina milaza fa any Tsiafahy (amonjana ny gadra politika) izy, sy ny lazain'ny ao amin'ny fitondrana fa notazonina tamina “toerana notazonina ho tsiambaratelo” izy “noho ny antony fiarovana”. Efa voalaza moa fa amin'ny 25 janoary no hitsarana an'i Fetison Andrianirina. Tsy afa-nipoitra izy tamin'ny fiantsoan'ny fitsarana azy teo aloha, satria tsy fantatry ny mpisolovava azy ny toerana misy azy.
Hita tany amin'ny Sioka [Tweets] ihany koa fa tena ahiana tokoa ny toe-pahasalaman'ny roa tamin'ireo mpanongam-panjakana taorian'ny nisamboran'ny fitondrana tetezamita azy ireo. Ireo mpanongam-panjakana roa ireo moa dia ny Jeneraly Raoelina, lehiben'ny fiarovana tamin'ny andron-dRavalomanana sy tafiditra tamin'ny raharaha fitifirana tamin'ny Febroary 2009 , sy ny Kolonely Coutiti, nigadra nandritra ny fotoana nitondran-dRavalomanana noho ny heloka namotika ny mahaolona ka noafahana rehefa nitondra Rajoelina.
Nilaza moa ny lehiben'ny fiarovan'ny fitondrana fa niaro ny Kolonely Coutiti izy fa raha tsy izany dia lavo nandritra ny herisetra nanaovana azy. Nanamarina moa ny fitondrana fa tena narary tokoa ny Jeneraly Raoelina sy ny Kolonely Coutiti, nefa tsy nohazavainy kosa ny nahatonga izany toe-javatra izany izay efa naha eo ambany fanarahany maso azy ireo.
Noampangaina ho mpiray tsikombakomba tamin'ny fanaovana rotaka, ady an-trano ary ny asam-panohintohinana ihany koa ny Mpitsara Malagasy manana ny lazany sady filoha lefitry ny Fitsarana Iraisampirenena tany La Haye misotro ronono iray, ny Profesora Raymond Ranjeva, tamin'ny 12 oktobra. Nody an-tanindrazana moa Ranjeva rehefa nandeha nisotro ronono nahavita ny asany tany amin'ny Fitsarana tany La Haye. Niantso ny hisian'ny tetezamita tsy miandany izay tokony hotarihany izy. Namoaka anontan-kevitra antsoina hoe “Vonjy Aina” izy. Nalain'ny fitondrana ankehitriny tarihin'i Andry Rajoelina, izay nahomby tamin'ny fanilihana ny filoha voafidim-bahoaka Marc Ravalomanana nandritra ny fanonganam-panjakana Marsa 2009, moa ireo antontan-kevitra ireo ary nampifandraisiny tamin'ilay fanonganam-panjakana nandamoka. Noafahana moa ny Profesora Ranjeva rehefa nandoa antoka [caution].
Ny tena nahagaga dia ny nitazonana ny zanak'i Raymond Ranjeva, Riana Ranjeva, ho naniratsira ny miaramila izay nanafika ny tranon'ny rainy nitady ny porofon'ny fandraisany anjara tamin'ny fiokoana. Ny porofo nitazonana azy ho “manohintohina ny filaminam-bahoaka” moa dia ny fananany dikasoratra ny antontan-kevitra efa voalaza etsy ambony ” Vonjy Aina“, izay vahaolana -tolo-kevitra- naseho vahoaka amin'ny olona ara-politika mianjady ankehitriny.
Nanaovana fanadihadiana ihany koa ny mpitsara malaza iray hafa izay nianatra tany Harvard, nizaka ny zom-pirenena Malagasy sy Etazonia antsoina hoe Sahondra Rabenarivo, noho ny nitsikerany ny volavolan-dalampanorenana sy ny nampanaovany tsia. Nohadihadiana izy satria ao anatin'ny lisitra an-tserasera antsoina hoe Vonjy Aina. Noafahana moa izy taty aoriana.
Tao anatin'izany tontolon'ny tahotra izany no nitadiavan'i Citoyenne Malgache ny antony nanakatonan'i NJ ny bolongany, fantatra amin'ny fanoherana an-drajoelina sy ny governemantany moany bolongan'i NJ.
“Vao nahamarika aho fa tsy hita hojerena intsony ny bolongan'i NJ ka tsy aritra ny tsy hanontany na dia efa manana izay mety ho valiny aza aho. Dia manontany tena hatrany aho amin'izao toe-javatra rehetra mitranga izao… mbola hahasahy hanoratra hatrany ve aho eto amin'ity bolongana ity? Adidy demaokratika ny maneho hevitra amin'ny maha-olom-pirenena, saingy mety hanelingelina ny eo amin'ny fitondrana izany sy haharomotra ireo mpanaraka azy…
Inona no hitranga raha hiala daholo isika rehetra? mba mety ve ny mahita ireo zazavao tsy mitsahatra ny manondro basy isaky ny kihon-dalana?…”
Ndimby, mpamaham-bolongana ara-politika, raha maneso ny amin'ny hamaroan'ny fisamborana ara-politika.
“…ankoatra ny kianja sy ny tramways, efa voaomana ao amin'ny fampiasam-bolan'ny Shinoa ihany koa ve ny fananganana fonja mora hametrahana ny mpanohitra rehetra, ny mpanao gazety, ny fiarahamonim-pirenena, ary mety ho avy koa ny anjaran'ny masoivoho sy ny fiarahamonina iraisam-pirenena?”
Nitovy hevitra tamin'i Citoyenne Malgache koa izy tamin'”ny filazana fa tsaho na teny diso fipetraka dia mety mahatonga anao ho any am-ponja :
“… Amin'izao toe-javatra misy eto Madagasikara izao, ny Hery no mibaiko ny Lalàna, izay mandiso ny fiteny malazan'i Ciceron hoe “Cedant arma togae” (ny fitaovam-piadiana aoka hanome fahefana ny lamba [sivily]. Eo ambany fiarovan'ny fitondrana milaza ho mampiasa ny Finoana sady mipetraka eo ambony Lalàna, dia misy ireo mahasahy miteny izay tiany hotenenina nefa tsy voatohitohina [voasazy] . Aoka ho malina ny rehetra, fa mety ho voampanga amin'ny tsy antony eodaholo : namono an-dRatsimandrava, atidohan'ny fanafihan'ny 11 Septambra, nanohana tamin'ny fanaovana baomba vita tanana, nametaveta zazakely, sy izay rehetra tsy fantatra intsony. Aoka tsy hisy intsony ny ho gaga raha misy ny mahare avy any amin'ny gazetin'ny vohitra 12 fa i Ndimby dia tsy iza fa i Oussama ben Laden, izay nialokaloka teto Madagasikara rehefa nanala volombava sy ny baraka (na ny mifamadika amin'izay).
Mety hampivezivezena fonja anao [dia telo] avy hatrany ankehitriny ny teny diso, na lahatsoratra manivaka loatra na evina ratsy faneno :
dingana voalohany ny tsaho : lahatsoratra na fampielezam-peon'ny mpanohana ny fitondrana; dingana faharoa ny fampihorohoroana : any amin'ny biraon'ny zandary; dingana fahatelo ny hirifiry : fonja eny Antanimora. Tsy mihetsika akory anefa ianao amin'izany rehetra izany. Ary dia manontany ireo sahisahy ao amin'ny efitra fandraisam-bahiny na avy eto Antananarivo na any amin'ny 10.000 kms any aho izay miantso ny mpanao politika na mpikambana eo amin'ny fiarahamonim-pirenena ho sahy hanohitra ny tsy rariny : Fa aiza moa izy ireo rehefa misy ny tsindritsindry atao amin'ireo tsy manaiky ny fisainan-tokan'ny be sandry sy bevava? Na amin'ny politika na amin-javatra hafa, tsy ny mpanolo-tsaina mihitsy no hiantoka …”